Zeziphi iimali ezibhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Imali emele ibhatalwe
Zeziphi iimali ezibhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb?
Ibalwa njani imali endimele ndiyibhatalele ukubhukisha kwam?
Ndingazifumana ndize ndizilawule njani izicwangciso zamaxabiso am?
Amaxabiso osuku akhethekileyo ayichaphazela njani imali endiyibhatalwayo?